I-Orlistat powder emnyama (96829-58-2) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
5.00 koku 5	ngokusekelwe ku 1 isilinganiso ikhasimende
I-Orlistat eyiphuphuphu i-powder iyisidakamizwa esetshenziswa ekwelapheni ukukhuluphala. Umsebenzi wayo oyinhloko uvimbela ukungenisa amafutha ekudleni komuntu ....
Umthamo: 1470kg / inyanga
I-Raw Orlistat powder (ividiyo ye-96829-58-2)
I-Orlistat powder enqamule iklasi yezokwelapha okuthiwa i-lipase inhibitors esebenza ngokuvimbela ukumunwa kwe-25% wamafutha esidlweni futhi isetshenziselwa ukulahlekelwa isisindo kubantu abadala abakhuluphele, iminyaka engu-18 nangaphezulu, uma isetshenziselwa ne-calori encishisiwe futhi ukudla okunamafutha aphansi. I-Orlistat powder enqamulelayo iyisidakamizwa esenzelwe ukwelapha ngokweqile. Umsebenzi wayo oyinhloko uvimbela ukungenisa amafutha ekudleni komuntu, ngaleyo ndlela kuncishiswe ukudla kwe-caloric. I-Orlistat powder ewomshini isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwalokhu ku-enzyme, i-triglycerides kusukela ekudleni ivinjelwe ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids futhi ixhunyiwe ngaphandle kwe-nongested. I-Orlistat powder ye-prescription eqoshiwe isetshenziselwa abantu abaqine ngokweqile abangase babe nomfutho wegazi ophezulu, isifo sikashukela, i-cholesterol ephakeme noma isifo senhliziyo. Ukuphumelela kwe-Raw Orlistat powder ekukhuthazeni ukulahlekelwa kwesisindo kuqondile kepha kuthobekile. Idatha ehlukanisiwe kusuka ekuhlolweni kwemitholampilo iphakamisa ukuthi abantu banikezwa i-Orwolat e-Radiat ephuzile ngaphezu kokuguqula indlela yokuphila, njengokudla nokuzivocavoca, balahlekelwa ngamakhilogremu angu-2-3 (4.4-6.6 lb) ngaphezu kwalabo abangathathi izidakamizwa phakathi nenkathi yonyaka. I-Orlistat powder enqamulelayo futhi iyancipha ngokunciphisa ukucindezeleka kwegazi futhi ibonakala ivimbela ukuqala kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, kungakhathaliseki ukuthi isisindo sokulahlekelwa ngokwayo noma eminye imiphumela. Linciphisa izifo zesifo sikashukela uhlobo II kubantu abakhuluphele abazungeze inani elifanayo lokuthi izinguquko zokuphila zenzani.
I-Orlistat powder emnyama (Imininingwane ye-96829-58-2)
Igama Product I-Orlistat powder
Igama leKhemikhali Tetrahydrolipstatin, 1-((3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl)dodecyl-2-formamido-4-methylvalerate
Brand NAme I-Alli, i-Xenical
I-Drug Class lipase inhibitors
CAS Inombolo 96829-58-2
I-molecular Fi-ormula C29H53NO5
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-495.745 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-495.392 g / mol
Ukuxuba Pi-oint <50 ° C
Fukuvuselela kabusha Pi-oint Ayikho idethi etholakalayo
I-Half Half-Life Ngokusekelwe kwedatha elinganiselwe, ingxenye yokuphila ye-Raw Orlistat powder etholakalayo iphakathi kwe-1 namahora we-2.
solubility I-DMSO: 19 mg / mL
Storage Tukushisa Isikhathi sokugcina. I-2-8 ° C
Aukuphikisana Sebenzisa ukuphatha ukukhuluphala.
I-Orlistat emifushane i-powder (96829-58-2) Incazelo
I-Orlistat powder ewomshini elasini lemithi ebizwa ngokuthi i-lipase inhibitors esebenza ngokuvimbela ukumunwa kwe-25% wamafutha esidlweni futhi isetshenziselwa ukulahlekelwa isisindo kubantu abadala abakhuluphele, iminyaka engu-18 nangaphezulu, uma isetshenziselwa ne-calori encishisiwe futhi ukudla okunamafutha aphansi.
I-Orlistat powder ewomshini yidakamizwa eyenzelwe ukwelapha ukukhuluphala. Umsebenzi wayo oyinhloko uvimbela ukungenisa amafutha ekudleni komuntu, ngaleyo ndlela kuncishiswe ukudla kwe-caloric. I-Orlistat powder ewomshini isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwalokhu ku-enzyme, i-triglycerides kusukela ekudleni ivinjelwe ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids futhi ixhunyiwe ngaphandle kwe-nongested. I-Orlistat powder ye-prescription eqoshiwe isetshenziselwa abantu abaqine ngokweqile abangase babe nomfutho wegazi ophezulu, isifo sikashukela, i-cholesterol ephakeme noma isifo senhliziyo. Ukuphumelela kwe-Raw Orlistat powder ekukhuthazeni ukulahlekelwa kwesisindo kuqondile kepha kuthobekile. Idatha ehlukanisiwe kusuka ekuhlolweni kwemitholampilo iphakamisa ukuthi abantu banikezwa i-Orwolat e-Radiat ephuzile ngaphezu kokuguqula indlela yokuphila, njengokudla nokuzivocavoca, balahlekelwa ngamakhilogremu angu-2-3 (4.4-6.6 lb) ngaphezu kwalabo abangathathi izidakamizwa phakathi nenkathi yonyaka. I-Orlistat powder enqamulelayo futhi iyancipha ngokunciphisa ukucindezeleka kwegazi futhi ibonakala ivimbela ukuqala kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, kungakhathaliseki ukuthi isisindo sokulahlekelwa ngokwayo noma eminye imiphumela. Linciphisa izifo zesifo sikashukela uhlobo II kubantu abakhuluphele abazungeze inani elifanayo lokuthi izinguquko zokuphila zenzani.
I-Orlistat powder (96829-58-2) Indlela Yokusebenza
I-Orlistat powder yiluhlobo lwe-lipase oluvimbela isisindo sokulahlekelwa kwesisindo futhi luyisisindo samanzi se-lipostatin. I-orlistat iphumelela futhi ikhetha ukuvimbela i-lipase yesisu ne-pancreatic lipase, kanti ingenalo ithonya kwamanye ama-enzyme okugaya (njengama-amylase, trypsin kanye ne-chymotrypsin) ne-phospholipase, futhi ayithinti ukumuncwa kwama-carbohydrates, amaprotheni nama-phospholipids. Lesi sidakamizwa asixhunyiwe nakuba isisindo samathumbu futhi sinomphumela wokuvimbela ukuguqula i-lipase. I-Orlistat ikhubaza ama-enzyme ngokubophezela ngokuqinile emanzini ase-serine ezindaweni ezisebenzayo zesisu ne-pancreatic lipase. Lokhu kuvimbela amanoni ekudleni ukuthi aphule emahhala ama-acids nama-diacylglycerol mahhala, ngakho-ke angeke akhishwe, anciphise ukudla kwe-caloric ngakho-ke ukulawula isisindo somzimba. Lesi sidakamizwa akudingeki sithathwe ngumzimba wonke ukuba sisebenze. Umsebenzi we-Orlistat wezokwelapha uncike ekutheni: umthamo wezokwelapha we-Orlistat (120mg / d, tid, ezithathwe ngokudla), okuhlangene nokudla okuphansi kwekhalori, kunganciphisa kuze kufike ku-30% kokunceliswa kwamafutha. Esikhathini sokucwaninga ngokuqhathanisa amavolontiya avamile futhi akhululekile, i-Orlistat yayingenakunyakaziswa ngumzimba nhlobo futhi ibe nokuhlushwa kwegazi kakhulu. Ngemuva kwesilinganiso esisodwa somlomo (esikhulu kakhulu esingu-800mg), ukuxilongwa kwegazi kwe-Orlistat kumahora alandelayo we-8 kwakungu <5 ng / ml. Ngokujwayelekile, umthamo wokwelashwa we-Orlistat unomzimba omncane kuphela futhi ngeke uqoqe ngesikhathi esifushane sokwelapha. Esivivinyweni se-in vitro, izinga lokubopha i-Orlistat namanye amaprotheni we-serum adlule kakhulu i-99% (amaprotheni ayeboshwe ikakhulukazi i-lipoproteins ne-albinin), futhi isilinganiso sawo sokubopha ngamaseli abomvu aphansi kakhulu.
Izinzuzo ze-Orlistat powder (96829-58-2)
▪ I-Orlistat inciphisa umzimba omkhulu ngaphezu kwe-20% ngokudliwa kwamafutha omzimba
▪ I-Orlista ikusiza ukuthi ufunde ukuthi ungabala kanjani amakholori
▪ I-Orlista ikunika umuzwa wenhlalakahle
▪ I-Orlista inemiphumela emihle ehlinzeka ngokuzethemba nokuthokoza kubasebenzisi
▪ I-Orlista inikeza imiphumela emide yesikhathi eside
▪ I-Orlista inciphisa ukujula kwezifo ezinjenge-hypotension, isifo sikashukela, isifo sokuqina kwesifo sofuba futhi
I-Orlistat enconyiwe i-powder (96829-58-2) Isilinganiso
Umthamo ophakanyisiwe we-Orlistat powder ungenye ye-120-mg capsule kathathu ngosuku ngokudla okuyinhloko okuqukethe amafutha (ngesikhathi noma kuze kufike ku-1 ihora ngemva kokudla). Amanani angaphezulu kwe-120 mg kathathu ngosuku awabonwanga ukunikeza inzuzo eyengeziwe.
Abantu kufanele babe nokudla okunomsoco, okunciphise-ikhalori okuqukethe cishe ama-30% wamakorikhi avela kumafutha. Ukudla kwansuku zonke kwamafutha, ama-carbohydrate, kanye namaprotheni kufanele kusakazwe ngaphezu kwezidlo ezintathu eziyinhloko. Uma ukudla kungabanjwanga ngezinye izikhathi noma kungaqukethe amafutha, umthamo we-Orlistat powder ungashiywa.
Ngenxa yokuthi i-Orlistat powder iye yaboniswa ukunciphisa ukungena kwamavithamini amaningi anamafutha kanye ne-betacarotene, abantu kufanele banikwe iseluleko ukuba bathathe amavithamini amaningi anamafutha amaningi ukuze baqinisekise ukuthi kunomsoco okwanele. Ngaphandle kwalokho, isithasiselo se-vitamin kufanele sithathwe amahora angu-2 ngaphambi noma emva kokuphathwa kwe-Orlistat powder, njengokulala ngesikhathi sokulala.
Imiphumela emibi ye-Orlistat powder (96829-58-2)
Kuyinto evamile ukubona imiphumela emibi ye-Orlistat powder uma usisebenzisa. Ungase ubone ezinye imiphumela emibi noma hhayi nje emva kokuthatha noma yimiphi imithi. Iningi lemiphumela efika nokusetshenziswa kwe-Orlistat powder kuhlobene nendlela isebenza ngayo ohlelweni lwakho lokugaya. Ngokuvamile ziba mnene futhi zenzeke njalo uma uqala ukwelashwa. Kwenzeka futhi ngemuva kokuba uthathe ukudla okunamafutha aphezulu. Ngenhlanhla, iningi labo lihamba njengoba ukwelashwa kuqhubeka futhi ngemva kokulandela ukudla okulungile.
Okulandelayo yiminye imiphumela emibi ejwayelekile:
▲ Ubuhlungu besisu / ukuphazamiseka
▲ Ukukhishwa kwamafutha
▲ Izitshalo ezinamafutha
▲ Ukushisa isikhumba esincane
▲ Ukuhlungu obusemhlane
Ngaphandle kwalokho, uma uthola noma yimuphi wale mibi, kufanele uyiphathe njengesimo esiphuthumayo bese ushayele udokotela ngokushesha. Kunjalo;
▲ Ubuhlungu obukhulu besisu obungaphumi.
▲ I-hives noma ukushaya ngokweqile
▲ Kunzima ukugwinya
▲ Ukuphefumula okunzima